Shirkii Farmaajo iyo Madaxda Maamullada oo dib u furmaya | KEYDMEDIA ONLINE
Shirkii Farmaajo iyo Madaxda Maamullada oo dib u furmaya
Waxay madaxda Labadii maalin ay kulmeen ay horumar aan badnayn ka sameeyeen qodobada qaar ee khilaafka ka jiray.
MUQDISHO, Soomaaliya - Farmaajo iyo Madaxda Maamul Goboleedyada ayaa Maanta la filayaa inuu Afisyooni uga furmo wajiga 2aad ee wadahadallada loogu gogol-xaarayo kulan weynaha lagu gorfeynayo arrimaha doorashooyinka.
Labo maalin waa nasasho iyo wadatashi aya galeen markii ay soo gabagabeeyeen kulankii hore, waxaana la filayaa in shirka Maanta furmaya ay diiradda ku saaraan ajendaha shirka ay Beesha Caalamka soo qaban-qaabisay ee lagu xalinayo khilaafka taagan.
Waxay madaxda siku mari la'yihiin qodobo ay kamid yihiin inuu Farmaajo talada dalka Rooble ku wareejiyo iyo inuu lamid noqdo Musharixiinta kale, maadaama uusan lahayn hadda wax awood sharci ah oo dalka ku maamuli karo ama go'aan ku gaari karo.
Waxaa sidoo kale jiray qodobo arinta Gedo ugu wayn tahay, oo iyana kamid noqonaya waxyaabaha keenay dib u dhaca doorashadda Soomaaliya, kadib markii Farmaajo uu diiday inuu doorashadda Garbahaarey ku wareejiyo Axmed Madoobe.
Si kastaba, waxaa isha lagu hayaa waxa kasoo bixi doono shirka Maanta u furmaya Farmaajo iyo shanta Madaxweyne maamul Goboleed kuwaasoo saddex kamid ah Villa Somalia la safan.